ကိုယ့်ရဲ့ Blog မှာ Vistor ဘယ်နှစ်ယောက်လာပြီး ဖတ်နေလဲဆိုတာကို သိနိုင်ဖို့အတွက် Online visitor Counter တွေကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဒီလို Online Counter မျိုးတွေကတော့ Popular ဖြစ်တဲ့ Website တွေအတွက် ပိုပြီးသင့်တော်ပါတယ်။ ဥပမာ ... TechCrunch လိုမျိုးပေါ့။ အဲဒီ site ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ အနည်းဆုံး Visitor 300 လောက်ကတော့ Online အမြဲတမ်း ရှိနေတတ်တယ်။ နောက်ပြီး Reader များတဲ့ Blog တွေမှာ ထည့်ရင် visitor/reader ရဲ့impression ကိုလည်းပိုပြီးတော့ ရစေပါတယ်။ Popular ဖြစ်တဲ့ Online counters တွေထဲမှာမှ အခုနောက်ပိုင်း လူသုံးအများဆုံး ဖြစ်လာတာတွေကတော့ ...
Popular အဖြစ်ဆုံး service တစ်ခုပါ။ Signup လုပ်ဖို့မလိုပါဘူး။ တစ်ခါတည်း Code ကိုယူပြီး ထည့်သုံးရုံပါပဲ။ TechCrunch မှာလည်း ဒီ counter ကိုပဲ သုံးထားတာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ အခု Color Theme ရွေးတဲ့ Feature ပါ ပါလာတယ်။ နောက်ပြီး အရင်နေ့တွေက past status တွေကိုပါ ပြန်ပြီး checking ပြန်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
Registration လိုအပ်ပါတယ်။ Button style နဲ့ Color တွေကို ရွေးချယ်ခွင့် ပေးထားပါတယ်။ Online Time (eg. 1min, 2min etc...) အတွင်းမှာ Visitor ဘယ်လောက်လာခဲ့သလဲ ဆိုတာမျိုး သတ်မှတ်ပြီးတော့လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
signup လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ ကိုယ့်blogကို လာလည်တဲ့ Visitor ရဲ့ နိုင်ငံအလိုက် Flag လေးတွေနဲ့ ပြပေးတဲ့ Feature ကလည်း သုံးချင်စဖွယ်ဖြစ်အောင် ဆွဲဆောင်ထားပါတယ်။ neocounter အပြင် neoEarth, neoFlags, နှင့် neoBoard စတဲ့ service တွေကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသေးတယ်။
signup လိုပါတယ်။ Tracking Feature ပါပါတယ်။ domain တစ်ခုထက်မက ပိုပြီးတော့သုံးနိုင်ပါတယ်။ Blog များစွာ ပိုင်ဆိုင်တဲ့သူတွေအတွက် ပိုသင့်တော်ပါလိမ့်မယ်
signup လုပ်စရာ မလိုပါဘူး။ Coding ယူပြီး တစ်ခါတည်း အသုံးပြုရုံပါပဲ။ Online ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာ ပြရုံသက်သက်ပါပဲ။ တစ်ခြား Features တွေ မပါပါဘူး။
ကျန်ခဲ့၊ လိုအပ်ခဲ့တာလေးများရှိခဲ့ရင်လည်း comment မှာ ရေးပေးနိုင်ပါတယ်
Tags: web tool, web2.0, visitor counter, online counter, visitor online
Thet Oo 7:57 pm
ahmeisoekyi 3:44 am
အေး တူနယ်ဂျင်း ဒီလို blogging နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ post တွေ ဆက်လုပ်.. အားပေးတယ်တွ..ဟီး
Sai Linn Thu 3:48 am
ွှ့Thanksalot!
CMS 10:26 am
ကိုသက်ဦး > ကိုသက်ဦးပြောတာမှန်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုနောက်ပိုင်းမှာက အဖြူကို standard ထားပြီး တော်တော်များများသုံးကြပါတယ်။ အဓိက အကြောင်းအရင်းကတော့ Graphic တွေကြောင့်ပါပဲ။ အဖြူ background ပေါ်မှာ Graphic ထည့်ရတာလွယ်ကူတယ်။ ဘာမှ ပြန်ပြီး edit လုပ်စရာမလိုဘူး။ ပြီးတော့ တစ်ခြားနောက်ခံ အရောင်တွေထက်စာရင်လည်း ပိုပြီး ကြည့်လို့ကောင်းတယ်။ အဲဒီအချက်ကြောင့်ပါ။ ကိုသက်ဦးပြောလို့ ကျွန်တော်လည်း Layout color ကို ကစားကြည့်ပါဦးမယ်။ အခုလို အကြံပြုတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုသက်ဦး:)
ahmei, sai linn thu > welcome တူငယ်ချင်း :)
ByN-181 2:02 pm
ဖြူမဲ၊ မဲဖြူ :P။ မရောက်တာ ကြာပြီ။ တန်ဖိုးရှိတဲ့ ပို့စ်တွေပါ ဖိုးချမ်း။